Can 2019 – Baolina kitra : Atao any Afrika Atsimo, na any Egypte -
AccueilVaovao SamihafaCan 2019 – Baolina kitra : Atao any Afrika Atsimo, na any Egypte
04/01/2019 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Taorian’ny nanesorana ny fampiantranoana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, amin’ny baolina kitra, eo amin’ny ekipam-pirenena tamin’i Cameroun, dia ho fantatra ny alarobia ho avy izao izay hampiantrano ny Can 2019. Nambaran’ny kaonfederasiona afrikan’ny baolina kitra (CAF) fa efa tsy isan’ireo firenena hofidiana hampiantrano ity fihaonana ity intsony i Maroc, ka ny iray amin’i Afrika atsimo sy Egypte no hampiantrano ny Can voalohany handraisana firenena 24 anjara.
Anisan’ny efa tafita amin’io dingana famaranana io ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea, na dia mbola manana lalao iray aza amin’ny volana marsa ho avy izao. Sambany teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra no hiatrika izay fihaonana an-tampony aty Afrika izay i Madagasikara. Andrasana ny fanomanana ny lalao miverina ihaonan’i Barea an’i Madagasikara amin’i Sénégal ataon’ny federasiona malagasy ny baolina kitra.
Ny 12 amin’ireo firenena 24 handray anjara amin’ny fifaninanana no efa fantatra. Ankoatra ny Barea an’i Madagasikara, dia sambany hiatrika izany koa i Mauritanie. Efa tafita amin’izany dingana izany ihany koa ry Algérie, Guinée, Côte d’Ivoire, Sénégal, Egypte, Tunisie, Maroc, Nigéria, Ouganda ary Mali.
Ny 14 jona ka hatramin’ny 13 jolay no hanatanterahana ity Can 2019 ity. Miteraka adihevitra goavana eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra afrikana ny safidy eo amin’ireo firenena roa voaray ny fangatahany hampiantrano ny lalao. Manana tombony kokoa raha ny fanehoan-kevitra samihafa i Afrika Atsimo noho izy efa manana ireo fotodrafitrasa afaka mandray ny lalao iraisam-pirenena toa izao. Anisan’ny hanakianan’ny maro an’i Egypte ny toetr’andro any an-toerana amin’izany volana jona izany. Ny Alarobia ho avy izao no hamoaka amin’ny fomba ofisialy izay firenena hampiantrano ny CAN 2019 ny CAF, izay tarihin’i Ahmad.